Fisafidianana ny tantara foronina tsara indrindra
Fanamarihana ireo tantara foronina
Ny lapan'i Barbazul, nataon'i Javier Cercas
Ilay mahery fo tsy nampoizina indrindra amin'ny karazana mpitsikilo izay mijery ny fitaratry ny Vázquez Montalbán. Satria i Melchor Marín dia reincarnation, miaraka amin'ny fiovaovan'ny habaka-fotoana-tetika, an'i Pepe Carvalho izay nitarika antsika tamin'ny birao matroka na tamin'ny alina maizina indrindra tao Barcelona. Javier Cercas dia nanitatra ...
Boky tsara indrindra 3 nataon'i Franck Thilliez
I Franck Thilliez dia iray amin'ireo mpanoratra tanora tompon'andraikitra amin'ny famelomana indray ny karazana tena manokana. Neopolar, subgenre an'ny tantara frantsay momba ny heloka bevava, dia teraka tamin'ny taona 70. Amiko dia marika mampalahelo, toy ny maro hafa. Fa toy izany ny olombelona, ​​mba hamaritana sy hanasokajiana azy ...
Andevo faniriana, nataon'i Donna Leon
Ilay mpanoratra amerikana Donna Leon dia manana ny voninahiny fitantarana noho ny fahagagana nataony tamin'i Venise. Roa amby roapolo taona taorian'ny nanombohany nisintona ny kofehin'ny drafitra voalohany nataon'ny Komisiona Brunetti namakivaky ny tanànan'ny lakandrano, ny kofehy voalaza dia nahatonga an'i Venise ho fipetrahan'ny tranga goavambe. Fiaraha-miaina ...
Ireo boky 3 tsara indrindra nataon'i John Verdon
Azo lazaina fa tsy mpanoratra marina i John Verdon, na farafaharatsiny tsy afaka nanokana ny tenany tamin'ny fanoratana izy noho ny fisoratan'ireo mpanoratra hafa izay efa nahita ny fiasan'izy ireo hatramin'ny mbola kely. Fa ny zavatra tsara amin'ity asa ity dia tsy tarihin'ny fitsipi-taona, na ...
Ny helok'i Saint-Malo, nataon'i Jean-Luc Bannalec
Toa i Jörg Bong no nandinika tsara ny zava-drehetra. Avy amin'ny solon'anarana tokony hampiasaina, Jean-Luc Bannalec, hatrany amin'ny kaomisera Dupin izay nihoatra ny haisoratra ary lasa singa miverimberina izay manafika ny sary an-tsaina amin'ny fahavaratra amin'ny tarika mahavariana. Satria avy any Bretagne frantsay iray iharan'ny herisetra rehetra ...
Ireo zaza tsara, nataon'i Rosa Ribas
Izany no atao hoe na ny fianakaviana tsara indrindra aza. Manjaka ny fisehoana ivelany. Ary izany indrindra no antony mahatonga azy any izay ny fisarahana sy ny fanalavirana izay tokony ho marika, satria tamin'ny lasa dia samy hafa be daholo. Nisy fotoana izay nitovizan'ny fianakaviana fitokisana, tamim-pahatsorana. Nanidina ny zava-drehetra ...
Andininy ho an'ny lehilahy maty, nataon'i Lincoln sy i Child
Ny ekipa nofinofisin'ny literatiora mainty, ny Douglas Preston sy Lincoln Child izay tsy mety may, dia miverina amin'ny ampaham-pahatelon'ny Inspecteur Pendergast izay handeha eo amoron'ny fianjerana aorian'ireo tranga marobe eo amin'ny fatorana. Fa izany no ananan'ny agents manokana, tsy misy olona tsy misy fihenjanana, ...
Quirke any San Sebastián, nataon'i Benjamin Black
Rehefa nampahafantarin'i Benjamin Black an'i John Banville fa ny fizarana Quirke manaraka dia hitranga amin'ny sarimihetsika Donosti efa malaza, tsy azony an-tsaina ny fahombiazan'ny raharaha. Satria tsy misy tsara noho ny feon'ny fampandrosoana ny tetika feno fifanoherana toa an'i San Sebastián tenany, ka ...
pejy1 pejy2 ... pejy9 manaraka →